Jadwalka isku dhafka ah ee 60 Istaraatiijiyada Wadarta - Gofumed
Ogast, 2009 GPS / Qalabka, topografia
Xaaladda qalabka sahanka, waa wax aad u badan in la isbarbardhigo midka iyo tan kale oo kale, oo ka mid ah calaamada ama tartanka. Shirkad kasta waxaa ka mid ah faahfaahinta alaabteeda, laakiin samaynta jadwalada isbarbardhigga waa hawl culus.
Ku saabsan tan, majaladda Muujinta Bilawga, oo ku takhasusay aagga juqraafiga iyo kan version waa bilaash, Waxa uu qabtay shaqo weyn in ka badan sanado 5. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato qalabka, taas oo noqon karta moodal isku mid ah ama soo saaraha kala duwan, iyo ka dib markaad taabato badinta "isbarbardhigga", jaantus isbarbardhiga astaamaha aan dooranay waa la muujiyay.
Wargeyska daabacan ee daabacaad kastaa wuxuu ka kooban yahay dib u eegisyo kooxo kala duwan, sanad kasta waxaa la cusbooneysiiyaa oo ay ku jiraan moodooyinka cusub. Xaaladdan, tani waa dib u eegida sanadka 2009 oo ay ku jiraan kuwa soo saaraha 11 iyo 60 moodooyinka guud ee Saldhigga, oo aan soo koobay miiska soo socda:
Qalabka waxaa ku jira
Leica Geosystems Inc. TPS1200 + Taxanaha Xirfadaha
Taxanaha CTS 3000
GTS 100N taxane ah
GPT 7500 taxane ah
Nidaamka Macluumaadka Nikon / Tripod NPL-502 Series
SOUTH NTS-960R SERIES
Pentax / Galbeedka Galbeedka R-300NX Series
CST / berger CST 200 Taxanaha
CST 200 Taxanaha
Spectra Precision / Nidaamka Macluumaadka Tripod Focus 10 Servo & Robotic
Waxaan qabaa inay tahay shaqo aad u fiican, oo ah dhibcaha bilowga halkan waxaad ka arki kartaa miiska, inkasta oo aysan ahayn nooca kaliya ee isbarbardhigga ay leeyihiin. Sidoo kale waxaan kugula talin lahaa adiga iska qor ee joornaalka, oo uu takhasuskiisu yahay geo-engineering (tan iyo 1975). Daabacan kaliya ayaa ka jira Mareykanka, waa lacag la'aan shirkadaha beerta, caalami ahaan waxaa jira version digital, iyo dabcan, waa lacag la'aan.
Post Previous«Previous TopoCAD, in ka badan Topo, in ka badan CAD
Post Next Liisaska Waxbarashada AutoCADNext »
11 Jawaab ah "Shaxda isu dhigma ee 60 Istaraatiijiyada Wadarta"
Waxaan kugula talineynaa Spectra.
javier flores isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan iibsado saldhiga guud oo miisaaniyaddaydu is waafajiso inta u dhexeysa dusha sare ee xNUMX diiradda iyo Nikon dtm-2.
waayo-aragnimadaada mid labadan ayaad igala talineysaa.
Encarla Lugo isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan waxaan xiiseynayaa inaan iibsado Saldhig Guud oo ah SOKKIA 630rk Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado nooca nooca uu yahay Saldhigan Guud iyo sidee ayuu u fiican yahay? Qof igala talin kara fa
Foif, laga bilaabo waxa aan arko waa calaamad dhaqaale waana sii kordheysaa ...
JOSAFAT HERRERA isagu wuxuu leeyahay:
Iga raali ahow, waxaan ubaahanahay macluumaad kusaabsan saldhiga guud, FOCUS kahor 6 CARA, SOFTWARE IYO DUGSIYADA SAAMEYNTA MACLUUMAADKA, WAA KU SAABSAN
Edson Bravo Labra isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay isbarbardhiga udhexeeya saldhigga Trimble 5605 iyo saldhigga Trimble 3605.
Waddankee ayaad deggan tahay?
Waxaan leeyahay khibrado fiican Sokkia SET, inkastoo ay jiraan noocyo kale.
Luis antonio sanchez cubillas isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan helo saldhigga guud, calaamad dhaqaale laakiin way diidaan shaqada taas oo lagu taliyey
ramon isagu wuxuu leeyahay:
xiiso leh maadaama ay jiraan astaamo ay leeyihiin isla markaana mid la barbardhigi karo rugta ay u baahan tahay isla markaana qaadan karto go'aan la aqbali karo
Juusto !!!! Aan ka dheerahay jacaylkayga ... Xaq! Mahadsanid! 🙂